Cathy Doll Aloe Toner & Essence - EasyAds Myanmar
စျေးနှုန်း : 9,500 Kyat (Fixed)
🌵Cathy Doll Aloe Vera Toner & Essence🌵
Lady လေးတို့ရဲ့ Best friend ​လေးဖြစ်တဲ့ Cathy Doll ရဲ့ ရှားစောင်းတိုနာလေးပါ။ သူက ဘာတွေ ကောင်းလဲ ဆိုရင်….
🔹Aloe Vera Extract ဖြင့် ပြုလုပ်ထားလို့ ကြမ်းတမ်း​နေတဲ့ အသားအရေကို အစိုဓာတ် ဖြည့်တင်းပေးပြီး လန်းဆန်းစေတဲ့ အပြင် အရေပြား ကိုလည်း အာဟာရဖြည့် သန့်စင်ပေးပါတယ်။
🔹အသားအရည်ကို တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်စေပြီး ချေွးပေါက်ကျယ်တာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်​နော်။
🔹အမဲစက်တွေ ဝက်ခြံတွေအတွက်လည်း တကယ် သင့်တော်တယ်။
🔹Sensitive Skin တွေလည်း သုံးလို့ရတယ်​နော်။
ဘယ်လို သုံးရမလဲ ဆိုရင်….
🔹ညအိပ်ခါနီး မျက်နှာသစ်ပြီးရင် Cotton pad လေးကို toner လေးနည်းနည်းဆွတ်ပြီး မျက်နှာ အနှံ့ အပေါ်ဘက်ကို ပင့်တင်ပြီး ပွတ်ပေးပါ။
➡ပြီးတော့ သူက Toner အနေနဲ့ပဲ သုံးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး​နော်။ Toner ရော Essence ရော နှစ်မျိုးလုံး သုံးလို့ရတဲ့2in 1 ​ပေါင်းစပ်မှု​လေး ဖြစ်တာကြောင့် Toner အဖြစ် Cotton Pad လေးနဲ့ သုံးပြီးတဲ့ အခါမှာ Essence အဖြစ် လက်ဖဝါးလေးထဲကို နည်းနည်း ထည့်ပြီး မျက်နှာ အနှံ့ကို သေချာ လိမ်းပေးပါ။
🔹ပြီး​တော့ Spray ဗူးထဲထည့်ပြီး mist အနေနဲ့သုံးရင်လည်း ရပါ​သေးတယ်တဲ့။
ကဲ….ဒီလောက် အဖက်ဖက်ကနေ ပြည့်စုံနေတဲ့2in 1 Products လေးကို သေချာပေါက်ကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူသင့်နေတာမို့ မင်မင်တို့ရဲ့ Messenger ကိုသာ အမြန် Hi လိုက်ပါတော့နော်။
Price – 9,500 kyats
#CathyDollAloeVeraTonerEssence 🌵Cathy Doll Aloe Vera Toner & Essence🌵 Lady လေးတို့ရဲ့ Best friend ​လေးဖြစ်တဲ့ Cathy Doll ရဲ့ ရှားစောင်းတိုနာလေးပါ။ သူက ဘာတွေ ကောင်းလဲ ဆိုရင်…. 🔹Aloe Vera Extract ဖြင့် ပြုလုပ်ထားလို့ ကြမ်းတမ်း​နေတဲ့ အသားအရေကို အစိုဓာတ်...